संसद् भवनअगाडि बम राख्ने युवक पक्राउ, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
संसद् भवनअगाडि बम राख्ने युवक पक्राउ, को हुन् उनि ?
काठमाडौ। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि शंकास्पद वस्तु राख्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका– २ घर भएका सुवास महतलाई पक्राउ गरेको हो।
सोमबार बिहान मोटरसाइकलमा आएर महत र अर्का एक व्यक्तिले सडकमा नक्कली प्रेसरकुकर बम राखेर भागेका थिए। उक्त प्रेसरकुकरको बाहिर नो एमसिसी लेखिएको थियो।
अचानक सडकमा प्रेसरकुकर राखेपछि प्रहरीले नेपाली सेनाको टोली बोलाएर चेकजाँच गर्दा उक्त कुकरमा नक्कली बम राखिएको खुलेको थियो ।प्रहरीले सिसिटिभी फुटेजका आधारमा महतलाई पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ परेका महत नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपानिकट विद्यार्थी संगठनका नेता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। तेस्तै, एक लाख ३० हजार घुससहित मालपोत कार्यालय चाबहिलका कर्मचारी र अन्य दुई बिचौलिया पक्राउ परेका छन्।
खरिदार लक्ष्मण बस्नेत, लेखापढी व्यवसायी विनोद श्रेष्ठ तथा होटेल व्यवसायी मीना मगरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार पक्राउ गरेको हो।जग्गा नामसारीका लागि खरिदार बस्नेतले आलटाल गरी घुस मागेको आयोगले जनाएको छ।
खरिदार बस्नेतसँग एक लाख तथा होटेल व्यवसायी मगरसँगबाट ३५ हजार घुस बरामद भएको छ। चाबहिलको मुस्ताङ थकाली भान्साघरबाट उनीहरू पक्राउ परेका हुन।
तेस्तै, नक्कली पुर्जा देखाएर ३३ लाख ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। नक्कली पुर्जा देखाएर एक व्यक्तिले जग्गाको बैनासमेत गरी ३३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका छन्।
ठगी गर्ने व्यक्ति ओखलढुंगा घर भई हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ११ कपन बस्दै आएका ३९ वर्षीय हितबहादुर बुढाथोकी रहेका प्रहरीले जनाएको छ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुँवरका अनुसार बुढाथोकीले साँखुस्थित कित्ता नम्बर ७५९ को दुई रोपनी जग्गामध्ये आठ आना ३५ लाख रुपैयाँमा दिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी ठगी गरेका छन्।
पीडितलाई जग्गाको पुर्जा र नक्साको प्रतिलिपि दिई ३५ दिनमा पास गरिदिन्छु भन्दै आश्वासन दिएर ३३ लाख रुपैयाँ लिएर जग्गा बैनाको कागज बनाएको खुल्न आएको कुँवरले बताए।
तोकिएको समयमा जग्गा पास नगरेपछि मालपोत कार्यालय साँखुमा बुझ्दा उक्त जग्गा हितबहादुरको नाममा नभएको खुलेपछि मात्रै पीडितले ठगीमा परेको थाहा पाएका थिए। पीडितले उजुरी दिएपछि महाशाखाले बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेको छ।
उनले अन्य व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा आफ्नो भनी नक्कली कागज बनाएर ठगी गरेको पाइएको छ। बुढाथोकीलाई कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसरको जिम्मा लगाइएको छ।
तेस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहले तीन किलो चरेससहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका इन्चार्ज सइ मीनबहादुर विष्ट र लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले सो परिमाणमा लागुऔषध चरेस बरामद गरेको हो।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका– ४ का ४० वर्षीय वीरेन्द्र हमाल, सोही ठाउँकी ३८ वर्षीया दीपा बुढा र जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका– २ की २३ वर्षीया खिमा खत्रीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
झोलामा लुकाइछिपाई भारत लैजाने क्रममा शंका लागेर जेकजाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट चरेस बरामद भएको सइ विष्टले बताए।